मसूर र गाजर क्रीम - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
मसूर र गाजर क्रीम
तरकारीहरू41 मिनेट4 व्यक्ति260२ क्यालोरी
हामी फिर्ता आउँछौं फलहरु संग लोड गर्न! यो समय मसूर र गाजरको क्रीमको साथ, पोषक तत्वहरूले भरिएको छ र यति सजिलो छ कि यसले तपाईंलाई एक भन्दा बढि हतारबाट बाहिर निकाल्दछ।
तपाइँको लागी खाता लिन यो एक नुस्खा हो हप्ता मेनूl किनकि यो सरल, बहुमुखी छ र साथै राम्रो आहारमा आवश्यक सामग्रीहरू समावेश गर्दछ।
मसूरको अतिरिक्त, यो तरकारीबाट तयार पारिन्छ जस्तै गाजर, प्याज र लसुन। र यसलाई थप दिन हामी जोड्यौं हल्दी... तपाई अरू के चाहानुहुन्छ?
1 मसूर र गाजर क्रीम
2 के तपाईं दाल र गाजरको क्रीमको बारेमा बढी जान्न चाहनुहुन्छ?
तपाईको साप्ताहिक मेनूको लागि फलफूलहरूको साथ एक सरल विधि
खाना पकाउने समय: 41M
कुल समय: 41M
300 ग्राम गाजर, खुली
Cooked०० ग्राम पकाइएको र खलिएको दाल
तरकारी ब्रोथ को 950 ग्राम
१ स्तर चम्चा (खैरो आकार) हल्दी
प्याल ठूलो खोर्स र काट्नुहोस्। हामी यसलाई लसुनको लौंगको साथ गिलासमा थप्दछौं, छील पनि। हामी दौरान काट्छौं Seconds सेकेन्ड, गति 3। हामी टुक्राहरू ब्लेड तर्फ कम गर्छौं।
यसै बीचमा, हामी खस्राइ र गाजर धुन्छौं।
समय पछि, गाजर सफा र ठूलो टुक्रा मा काट्नुहोस्। हामी उनीहरूको बीचमा पोच गर्दछौं Minutes मिनेट, १००º, गति १।
अर्को, हामी तरकारी ब्रोथ वा घरको ब्रोथ केन्द्रितको एक बड़ा चम्चाको साथ पानी थप्छौं। हामी पकाउछौं Minutes मिनेट, १००º, गति १।
पछि, हामी पहिले नै पकाइएको दाल थप्छौं र हामी कुकि। लामो गर्छौं Minutes मिनेट, १००º, गति १।
समयको अन्तमा, हामी नुन समायोजित गर्दछौं र हल्दी थप्दछौं। हामी समयमा कुचल्छौं १ मिनेट, प्रगतिशील गति 1-5-१०।
के तपाईं दाल र गाजरको क्रीमको बारेमा बढी जान्न चाहनुहुन्छ?
यो नुस्खा बनाउन तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भाँडोको दाल पहिले नै पकाइएको छ वा तिनीहरूलाई थर्मोमिक्समा पकाउनुहोस्। यसले केहि लामो समय लिने छ तर तपाइँ तपाइँको आहार मा कुल नियन्त्रण सुनिश्चित हुनेछ।
यदि तपाइँ दोस्रो विकल्पको लागि विकल्प गर्नुहुन्छ भने, म सुझाव दिन्छु कि तपाइँले प्रयोग गर्नुहोस् खैरो दाल त्यो छिटो कुक। अर्को विकल्प कोरल दाल हो, जुन एकदम चाँडो हुनुको साथै तपाईंलाई थप र color्ग पनि दिन्छ।
Si तपाईंसँग तरकारीको ब्रोथ छैन तपाईं उही मात्रामा पानी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ केन्द्रित सब्जी स्टक पेस्ट को एक बड़ा चमचा o पाउडर म यी विकल्पहरू धेरै नै प्रयोग गर्दछु, विशेष गरी जब रेसिपीमा पहिले नै तरकारीहरू समावेश हुन्छन्।
हल्दी अनिवार्य छैन तर म यसको प्रयोग सिफारिस गर्दछु किनकि यसमा केहि छ विरोधी भड़काउने र antioxidant गुणहरु उत्कृष्ट
याद गर्नुहोस् कि हल्दीको गुणहरू बृद्धि गर्न तपाईं यससँगै आउनु पर्छ बोसो र खुर्सानी। यस अवस्थामा हामीले जैतुनको तेल र कालो मिर्च प्रयोग गरेका छौँ जुन नुस्खाको साथ पनि राम्रोसँग जान्छ।
तपाईं थोरै थोरै थप्न सक्नुहुन्छ तरकारी। यसले तपाईलाई बिभिन्न स्वाद प्रदान गर्दछ तर धेरै चाखलाग्दो पनि।
दाल र गाजरको यो क्रीमको साथ, केन्द्रमा सलाद र केही zucchini मीटबलहरू वा केहि माछाको गाला तपाईं एक हुनेछ खाना वा बेलुका धेरै पूर्ण
यो नुस्खा फ्रिजमा राम्रो राख्दछ days दिनका लागि र स्थिर पनि गर्न सकिन्छ।
थप जानकारी - तरकारी केन्द्रित बोउलोन ट्याब्लेटहरू / घरेलु तरकारी ध्यान केन्द्रित पाउडर / Zucchini मीटबलहरू / माछाको गाला
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सजिलो, तरकारीहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » सजिलो » मसूर र गाजर क्रीम
नमस्कार, मलाई यो नुस्खा रमाईलो लाग्यो तर म दाल पकाउन मन पराउँछु, कति बेर सम्म थप्न सक्छु?
याद गर्नलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई नियुक्त गर्नुहोस्:
ठिक छ, यो तपाईले प्रयोग गर्ने मसूरको प्रकारमा केही निर्भर गर्दछ र यदि तपाईंले राख्नुहुन्छ वा गर्नुहुन्न भने।
तपाइँलाई एक विचार दिनको लागि, म खैरो दाल प्रयोग गर्दछु, म तिनीहरूलाई एक घण्टा भिजाउन दिन्छु र minutes 35 मिनेटमा म तिनीहरूलाई तयार गर्दछु।
पोर्क र बटेर अण्डा भरिएको केक
रेड वाइन सॉसको साथ XXL सुपर मीटबॉलहरू